Induction Kuchenesa Capacitor Vagadziri uye Vatengesi - China Induction Heating Capacitor Factory
AC firita capacitor (AKMJ-PS)
DC chinongedzo capacitor DMJ-PC
DC KUSVIRA capacitor DKMJ-S
DC chinongedzo capacitor DMJ-MC
Yakasarudzika-inogadzirwa firimu capacitor yeanosvibisa
Yakakwira simba capacitor yemagetsi emagetsi
Tsika-yakagadzirwa Simba ma capacitors anoshandiswa muDC-chinongedzo maseketi
Yakakwira voltage DC firimu capacitors yesimba shanduko
Ul Certified Firimu Capacitor yeDhiza Pindikidzo (DMJ-MC)
Yakakwenenzverwa firimu capacitor yemagetsi magetsi applicatio ...
Yakakwenenzverwa Firimu Capacitor Rakagadzirirwa Defibrillator ...
Polypropylene Snubber Capacitors anoshandiswa pakakwirira voltag ...
Yakakwira-kirasi IGBT Snubber capacitor dhizaini yepamusoro po ...
Yakakwira mhando snubber ine Yakakwira kupomba mutoro kugona
Yakakwira yepamusoro yazvino snubber firimu capacitors dhizaini ye ...
RFM Kuchengetedza kupisa capacitor
Simba Range: kusvika ku6000 uF
Voltage Range: 0.75kv kusvika 3kv
Referensi Standard: GB / T3984.1-2004
A.Hapana zvechisimba zvemakanika vibration;
B. hapana magasi anokuvadza nemhute;
C.no kusagadzikana kwemagetsi uye guruva rinoputika;
Tembiricha iri pakati pechigadzirwa iri mune -25 ~ + 50 50;
E. iyo inotonhora mvura inofanira kunge iri yakachena mvura, uye tembiricha yemvura yekubuda iri pasi pe40 ℃.
Oiri-izere Magetsi capacitor ye induction kudziya choto
Mvura yakanyoroveswa ma capacitors anonyanya kushandiswa mune anodzora kana kuchinjika AC magetsi masystem ane akayera voltages anosvika 4.8kv uye mafrifti anosvika ku100KHZ kugadzirisa iyo simba chinhu mune induction kupisa, kusungunuka, kumutsa kana kukanda zvishandiso uye zvakafanana zvinoshandiswa.
Ichangobva kugadzirwa Induction kupisa capacitor yepakati repakati furoto
Induction kudziyisa capacitors zvakagadzirirwa kushandiswa kweiyo induction maficha uye mahedzi, kugadzirisa iyo simba chinhu kana wedunhu maitiro.
Iwo ma capacitors ese-firimu dielectric iyo yakaiswa mukati neiyo eco-inoshamwaridzika, isiri-chepfu inogadziriswa mafuta ekuisa mafuta. Izvo zvakagadzirwa semvura inotonhorera mhenyu kesi mayuniti (kesi yakafa pachikumbiro). Multi chikamu gadziriso (kubaya) inogonesa yakakwira yazvino kurodha uye kugadzirisa masoneti maseketi akajairwa chimiro. Yakakurudzirwa ambient tembiricha uye kuyerera kwemvura kwakakosha kwazvo.
Mvura yakanyoroveswa capacitor ye induction kudziyisa michina
Basa rezuva nezuva muCRE
08 Ndira, 21
Gonesa ramangwana rako